Wathi ka "Clone": umlingisi, biography kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Brazilian TV ewuchungechunge "Clone" kubo bonke uchungechunge 250 ngabaqaphi igcinwe ingaqiniseki. Ngokuvamile izibukeli ezimi wabukela kanjani uthando anqobe izithiyo njengoba umuzwa unrequited ebhubhisa kusuka ngaphakathi, njengoba ngokungaqondi kuholela nemiphumela esabekayo. Zonke izinhlamvu telenovela zazikhanya bhá futhi yehlukene kaningi okubalwa, kodwa ukunakekela okukhethekile kufanele ikhokhwe Said we "Clone".
Indaba Umdlalo sika - intombazane Jade. Yakhula yaba eBrazil nisaphila ngendlela yesimanje. Ngeshwa, lapho intombazane eneminyaka engu-20 ubudala, unina zafa kabuhlungu futhi Jade wathunyelwa ukunakekelwa izihlobo eMorocco. Ukunakekela umshana wakhe wathatha phezu umalume wakhe Ali, Muslim kweqiniso.
Uma Jade, shining intsha nobuhle, dancing umdanso Oriental, ukuze kukhanye up kusihlwa buthuntu. Ngalesi sikhathi Ali weza wayovakashela umngane wakhe godson ubudala Lucas. Umfana kwesokunxele abukhali kakhulu ingxoxo abangane waya enyuka endlini ivulekile. Ungalindele, nangu ekubheka kwenzeka ukubona ubuhle ukudansa Jade. Amehlo akhe ahlangana nakaJesu, futhi izinhliziyo abasha abamhlaba uthando. Jade futhi Lucas wafuna ukubaleka eBrazil ndawonye, kodwa uMalume Ali ayikwazanga uvumele ukucindezeleka kukusanganise. A, intombazane evela emkhayeni Muslim ayikwazi ukuqala ubuhlobo nomuntu gentile - nenhlamba ngabe ukuphoqelela lonke uhlanga. Ngakho-ke, u-Ali enquma ukushada ehlubuka ngokushesha ngokumelene Islamic amasiko nomshana. Ikuthola umkhwenyana uyakufanelekela - ocebile nokholwa Said.
Esikhathini uchungechunge "Clone" lomshado Jade futhi Said libonisa nazo zonke ubukhazikhazi kanye ukwehluka in the 20 chungechunge. Abasand 'ukutjhada ubungazwa abadansi eziningi, abagqoke izingubo zokulingisa enhlobonhlobo. Amathebula zigcwele awukudla. izivakashi eziningi abafisa injabulo Sayid futhi Jade. Ukufihla ngaphansi isembozo burqa zabesifazane, lowo mkhosi uyangena Lucas. It baxhumana Jade nhla okunenjongo. Nokho, umfana ayizange ngempela sizimisele ukuya nge isikhundla obuka esikhundleni umholi. Heroine othanda Brazilian, kodwa wesaba inyumbazana futhi badumale. Futhi yena oshada Said.
Wathi ka "Clone" - omelene Lucas. Akayena kobuntwana futhi ilungela ukulwa ngoba isihawu sayo likamakoti. Jade engazizwa yini ngomyeni esizayo, futhi uwela uthando naye ngisho umakoti endlini yomfowabo Ali. Uma sekuhwalala, lokulala, kuyilapho ubusuku lomshado, Sayid uthola ukuthi Jade akuyona abangenacala. Lokhu kungalimaza ngokujulile kuye. Izihlobo nhlangothi zombili balinde ngaphandle emnyango, ukuze ubone ishidi esinindwe yigazi - podverzhdenie ukuthi umakoti azigcine ngomyeni wakhe. Ngathi ngakho uthandana Jade ukuthi, kuphambene amasiko izimiso siqu uya inkohliso. Le nsizwa yenza ukuncishiselwa ngensingo, futhi igazi kusukela nilimaza embhedeni sprinkles. Ngakusasa ekuseni lo izihlobo wabingelela abasanda kushada - sibonga umyeni wakhe Jade ilondolozwe kusuka ihlazo, futhi umshado asindiswe.
Othandweni ukuze kokuthikamezeka
I telenovela "Clone" Jade futhi Said - izinhlamvu kabani ubuhlobo kuyinto ebuhlungu kakhulu. Akakwazi alukhohlwa uthando kuqala, futhi uphoqelekile ukuba uhlushwa imizwa engaphenduliwe. Wathi ka "Clone" - samuntu indoda ekahle. Abanakekela, ophanayo nokulibalela lomkakhe amazwi ahlabayo futhi Yizona. Kathathu iqhawe kwentukuthelo renounces Jade futhi ufuna kakhulu ukufaka isehlukaniso. Nokho kamuva Wathi ukulungele ukuthethelela zonke abesifazane, kuze kube phakade bethatheka inhliziyo yakhe. ababukeli abaningi izinkundla, ukuxoxa umbukiso, bathukuthela, futhi zazisola Jade for lokuzikhethela okungalungile. It engawunaki Wathi, inhliziyo yabo igolide, futhi ufuna kabusha Lucas kwezinsana.
Ithi yini oyithandayo, Saeed ka "Clone" kuyinto ube nesandla ngamashwa abo. Ngemva kweminyaka engu-20, iletha Jade eBrazil iqala ubudlelwano ibhizinisi Leonidas Ferraz, uyise Lucas '. Sayid ufuna ukuziphindiselela, uyalala futhi ubona ukuhlangabezana kanjani Lucas futhi iyobonisa ukuthi inamandla Jade, futhi isitha sakhe wasala lutho. Kodwa yilokho kanye kubangela uhlamvu ogibeni. Re kokubona each nye they zivuse abathandi esidlule iphupho ufuna ukuqala lonke futhi.
Wathi ka "Clone" kuyinto esithukuthele. He is ngisho akulungele ukubulala abaphikisi, izinkumbulo zazo zonakale umshado wakhe. Ubuthi umhawu, hero ufuna "kwabathinta" futhi Jade. Yena umemezela ukuthi uhlose ukuthatha unkosikazi wesibili. Esikhathini uchungechunge "Clone" uchungechunge "Wedding Wathi", okuyinto ingenye isiqephu wokuhamba we telenovela, kuye kwaba esinye sezikhathi zaguquka ngesakhiwo. Wathi ethatha umfazi kanye Rania abasha kuhle, omunye ubuhle obukhulu kunabo bonke Morocco. Ngokungafani Jade Rania iye nikela kumyeni wakhe, emelela image cishe esiphelele umfazi Muslim. Yena ulwela ukujabulisa umkakhe, ngisho nasezintweni ezincane, njalo amathayi friendly futhi ungalokothi simtshele amazwi amnandi. Nokho, Wathi abaningi egxilile imicabango mayelana nokuthi kungani ephelele ukuze ngazo zonke izindlela Rania namanje abakwazi esikhundleni Jade.
Hero ngisho teaming up Lucas nomkakhe, Maiz, okuyinto nayo inenkinga ukunganaki ngasohlangothini ngesiwombe sesibili. Ndawonye zifike ngohlelo ngobuqili kanjani, ukuze zehlukanise phakathi abathandi.
Dalton Vigh ngesimo Saida
Wathi ka "Clone" ocime sibonga namaqiniso futhi izinkanuko ezinjalo umlingisi Dalton ISAP, ukuwudlala. Vig ebuntwaneni umxhwele yesehlakalo, kodwa namanje ngacabanga kufanele ukhetha ukuba kube umsebenzi uzinze ngokwengeziwe. Wangena University ubuhlakani ukukhangisa futhi wayengumfundi wesazi abazikhandlayo.
Ngemva kokuthola iziqu, Dalton waqaphela ukuthi ebuntwaneni iphupho ushiye hhayi kuye. Waqala ngo-idrama esikoleni, futhi kungakabiphi ngase indima yakhe kuqala ifilimu O Porao. Ngo-2000 waba isilinganiso ehola kubonisa TV eziphezulu, futhi ngo-2001 isiphetho ISAP ethulwa isipho sangempela - inkontileka yokudubula endaweni "Clone". Esikhathini chungechunge, umlingisi wembula ithalente lakhe enemisebenzi - ubuntu bakhe ocime enjalo sikhumbuleke futhi ezihambayo. Dalton Vigh lolungenamaphutsa kuvezwa Said impi ngaphakathi, imvelo yakhe eziphikisa. Ngaphandle, umdlali oyiqhawe esiqinile futhi iqine, kodwa inhliziyo yakhe igcwele izinhlungu. Omunye ngokomzwelo kakhulu baba kumdlali ochungechungeni TV "Clone" lomshado Jade futhi Said (Isiqephu №20). Lapho exoxa ne-Dalton Vigh ayebanika ukuthi Wathi yena Kwakunzima kakhulu ukudlala. "Wathi - kanzima kakhulu umuntu mina", - umlingisi wavuma.
Nokho, ukuphila kwangasese Vig anolaka esifanayo, njenganoma ubuntu bakhe. Ngemuva ngemishado emithathu Dalton sika. Manje ngishadile okwesine, actress Camila Circassian. Ngo-July 2016, umbhangqwana azalelwa angamawele.
Esikhathini chungechunge, Sayid has a nomfowethu omncane Mohammed. Ekuphileni okungokoqobo, Antonio Colony, uMuhammad kudlalwa, kunalokho, omdala kunawe Dalton Vig iminyaka emibili.
Nivea Shtelman, odlala ngomfazi Saeed, Rania yesibili, into yokuqala waphoqeleka ukuba bahoxe Dalton ngendlela scene uthembeke. odwe Ngakho umqondisi Zhayme Monzhardim. Abalingisi ngubani neze babazi, waba double ukukhombisa bomsebenzi wabo ku isethi.
Kuyo yonke iziqephu uchungechunge ezihilela Said soprovodzhaet ingoma yisakhiwo sodumo enchanting avela kuye lo oculayo British Sting Ugwadule Rose. It ngokuphelele uqokomisa isimo abanothando hero.
Akubona bonke abalandeli of "Clone" ukwazi ukuthi candidacy Giovanna Antonelli ukuze indima Jade wanikelwa Dalton Vigh. Abadali yochungechunge engimamukele isiphakamiso. Mhlawumbe ngenxa leli qiniso acacile ukuze nangokomzwelo ukuze singene uchungechunge TV "Clone" Wathi futhi Jade. Uchungechunge omunye ngemva komunye, it lihlotshiswe izigcawu ndawonye Vig futhi Antonelli.
Entsha ifilimu Russian "Kiss!". Izibuyekezo azikhulumele